နိုဝင်ဘာလထဲ၌မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ပြန်လည်ကြွလာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ | Shan News ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2'+posttitle+''; document.write(trtd); j++; } document.write('
နိုဝင်ဘာလထဲ၌မိုင်းဖုန်းဆရာတော် ပြန်လည်ကြွလာတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ
ဓာတ်ပုံကဏ္ဍ . မှတ်သားစရာများ . ရှမ်း . ရှမ်းသတင်း
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)၊ မိုင်းဖုန်းဒေသတွင် သီတင်းသုံး စံမြန်းခဲ့သည့် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်သည် ယခု အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်သို့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တဆင့် ပြန်လည် ကြွရောက်တော်မှု လာတော့မည် ဖြစ် သည့်အတွက်မိုင်းဖုန်းဒေသရှိ ကျောင်းဆောင်အား ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်များမှ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများ ပြုလုပ်နေကြသည့်အပြင် ဆရာတော်အား ပြန်လည် ကြွရောက်နိုင်ရန် အတွက် လွှတ်တော်တွင် အဆိုတင်သွင်းခဲ့ သည့် ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦးအနက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းစိန် အပါ အ၀င် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးရယ် နှင့် အဖွဲ့မှ ဆရာတော် လက်ရှိ သီတင်းသုံးနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ သို့ သွားရောက်ပြီး ဆရာတော်အား တာချီလိတ်သို့ ပြန်လည် ပင့်ဆောင်ရန် ကိစ္စ အတွက် အောက်တိုဘာလ ၂၇ရက် နေ့လည် ၁နာရီအချိန်က သွားရောက် လျှောက်ထားရာ ဆရာတော်မှ နိုဝင်ဘာလအတွင်း ကြွလာမည်ဖြစ်ပြီး ကြွလာမည့်ရက်အား သတ်မှတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ပြန်လည် ကြွရောက်သည့်အခါတွင် အဆင်အသင့်ဖြစ်နေရန်အတွက် ပျက်စီး ယိုယွင်းနေသော ကျောင်းဆောင်များအား ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်များနှင့် အလှူရှင်များမှ စုပေါင်းကာ ဆောင်ရွက်နေကြကြောင်း သိရှိရသည်။